रियालिटी शोमा पुगे निर्माता र कलाकार, गर्न ‘अझै पनि’ को प्रचार ! « Mazzako Online
रियालिटी शोमा पुगे निर्माता र कलाकार, गर्न ‘अझै पनि’ को प्रचार !
फागुन १५ मा देशव्यापी रिलिज हुने नेपाली चलचित्र ‘अझै पनि’ ले प्रचार-प्रसारको गति तिब्र बनाएको छ । यसै क्रममा चलचित्र युनिट बुधवार अपरान्ह काठमाण्डौको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित एक प्रतियोगात्मक रियालिटी शोमा देखियो ।
ट्रिनिटी ईभेन्ट एण्ड मार्केटिङ्ले आयोजना गरेको ‘मिस कलेज आईडल २०१४’ को अन्तिम प्रतियोगितामा चलचित्रकी निर्माता पुनम गौतम, नायिका सुरक्षा पन्त, सह-नायकहरु विशाल ढुंगाना र पुष्प खड्काको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा चलचित्र टिमलाई सम्मान गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै निर्माता गौतमले चलचित्रले समाजका हरेक पाटोलाई समेट्दै परिवर्तनकारी चेतना फैलाउनुका साथै तथा मनोरञ्जनको नारालाई लिएर बनेको बताईन् । नेपाली नारीका थुप्रै पक्षलाई उठान गर्दै समाजमा हुने फरक–फरक प्रवृत्तीका महिलाका यथार्थ कुरा चलचित्रले पेश गर्ने उनले बताईन् । साथै गौतमले समाजमा नदेखिएका तर यथार्थपरक पात्रहरुले चलचित्रलाई थप रहस्यमय बनाएको जिकिर गरिन् ।